China SPC Ft SM-023 Nlụpụta na Factory | N'akụkụ
Nkọwapụta: 1210 * 183 * 4mm
1. Nchedo gburugburu ebe obibi. SPC ala bụ ụdị ụlọ ala dị iche iche echepụtara maka nzaghachi nke mbupute mba. PVC, isi ihe nke ala SPC, bụ ihe eji eme ka gburugburu ebe obibi dị mma na nke na-adịghị egbu egbu. Ọ bụ 100% enweghị formaldehyde, ndu, benzene, ọla dị arọ, carcinogens, soluble volatiles na radieshon. Ọ bụ n'ezie nchebe gburugburu ebe obibi. SPC floor bụ ihe eji emegharị ụlọ, nke dị oke mkpa iji chekwaa akụ na ụba na gburugburu ebe obibi nke ụwa anyị.
2. 100% mmiri na-adịghị, PVC enweghị njikọ na mmiri, ọ gaghị eburu mmiri n'ihi oke iru mmiri. N'oge mmiri ozuzo karịa mpaghara ndịda, SPC agaghị emebi nrụrụ mmiri, ọ bụ ezigbo nhọrọ maka ala ahụ.
3. Mgbochi ọkụ: ọkwa mgbochi ọkụ nke SPC bụ B1, nke abụọ naanị na okwute. Ọ ga-emenyụ na-akpaghị aka mgbe 5 sekọnd pụọ n'ire ọkụ. Ọ bụ ire ọkụ, anaghị ere ọkụ na-ere ọkụ, ọ gaghị ewepụta gas na-egbu egbu ma na-emerụ ahụ. Okwesiri maka oge nwere oke ọkụ chọrọ.
4. Antiskid. E jiri ya tụnyere ihe ndị dị n'ala ala, ala nano fiber na-enwe mmetụta dị egwu karị mgbe mmiri na-acha ya na ọ dịghị mfe ịfịcha. Karịa mmiri ọ na-ezute, ka ọ na-agụ ya karịa. Okwesiri ka ezinulo nwere ndi agadi na umuaka. N'ebe ọha na eze nwere nchebe ọha na eze dị elu, dị ka ọdụ ụgbọ elu, ụlọ ọgwụ, ụlọ akwụkwọ ọta akara, ụlọ akwụkwọ, wdg, ọ bụ ihe ala kachasị amasị.
5. Super eyi na-eguzogide. Uwe na-eguzogide akwa n'elu ala SPC bụ akwa na-eguzogide akwa na-edozi akwa nke teknụzụ dị elu, yana mgbanwe mgbanwe na-adịgide adịgide nwere ike iru ihe ruru 10000 mgbanwe. Dabere na ọkpụrụkpụ nke na-eyi na-eguzogide oyi akwa, ọrụ ndụ nke SPC n'ala bụ karịa 10-50 afọ. SPC bụ ala dị ogologo ndụ, ọkachasị maka ebe ọha na eze nwere nnukwu mmadụ na akwa akwa.
6. Ultra Ultra na àjà ihe ọ -ụ -ụ dị mkpa, ala SPC nwere ọkpụrụkpụ nke ihe dịka 3.2mm-12mm, ịdị arọ dị ala, ihe na-erughị 10% nke ihe ala ala. N'ime ụlọ ndị dị elu, ọ nwere uru ndị na-enweghị atụ maka ịrịgo steepụ na nchekwa nchekwa, ma nwee uru pụrụ iche na mgbanwe nke ụlọ ochie.
7. Okwesiri ka okpomoku di n’ala. SPC nwere ezigbo ihe na-ekpo ọkụ na nkwanye ọkụ ọkụ. Ọ na-arụkwa ọrụ nchekwa maka ezinụlọ ndị na-eji ọkụ na-eme mgbidi iji kpoo ala kpo oku. SPC n'ala meriri ntụpọ nke okwute, taịliki seramiiki, terrazzo, ice, oyi na-amị amị, yabụ ọ bụ nhọrọ mbụ nke ala kpo oku.
N'ozuzu Oke 4mm
Nkọwapụta nha 1210 * 183 * 4mm
Nke gara aga: SPC Ft SM-022
Osote: SPC Ala SM-050
SPC Ft SM-028
SPC Ft SM-022
SPC Ft SM-027
SPC Ala SM-025